Paika diso | Hevitra MPANOHARIANA |
2010-05-20 @ 23:13 in Politika
Tontolo andro nisiana fifampitifirana teo amin'ny samy mpitam-basy tokoa ny andron'ny 20 mey 2010 teto Antananarivo. Nanapa-kevitra avy hatrany ny handrava ilay fidinana an-dalambe voatery nampidirina tanaty toby ny avy amin'ny mpitana ny fahefana. Andro atoandro ihany ny fanafihana. Satria tsy nahazo ny toerana notadiavina ny HMF dia anilan'ny toby no nanatanterahana izany. Raha ny fijeriko azy dia tokony ho nangina fotsiny ny tao amin'ny HMF rehefa nahatsapa avy hatrany ny olona fa any Andrainarivo ilay toerana hihaonana. Nefa efa izay angamba no nifanarahana. Heveriko fa tsara ampanombohana ihany ilay tetika fa nisy zavatra banga tao aoriandriana tao.
Hitako fa tsy nivonona ho amina tolona fifampiarovana mahery vaika ny mpandala ny ara-dalàna nanaraka ny HMF. Tsy tokony ho navela hiasa irery ireo mpitandro ny filaminana niaro ny mpitolona fa nampiana tosika avy taty ivelany. Mitoetra hatrany ilay tsy fananana rindran-damina tokony ho nanaovana izany. Raha izay manko no nitranga dia tsy maintsy nijery ny taoriany ny Emmoreg sy ny fis. Saingy efa efa fotoana lasa avokoa izany rehetra izany ankehitriny. Angamba ny tiana haseho tao anatin'iny hetsika andro iray iny dia ny hampisehoana eo imason'izao tontolo izao fa tena misy tokoa ny olona vonona ny hiaro ny tigetrany sy ny safidy politikany. Rehefa vita ny fotoam-pivavahana tao an-toby dia tokony ho nisintaka amin'izay ny olo-tsotra mba hahafahan'ny zandary niatrika izay mety hanafika azy. Soa ihany fa nahay namoaka ny sivily aloha ry zareo
Fa niasa mafy dia mafy ihany koa ny fanelezana tsaho sy lainga entina hanakiviana ny mpifanandrina amin'ny tena. Ady fiady avokoa ireny rehetra ireny hahazoana ny fandresena. Amin'izao fotoana izao manko tsy fantatra izany tena marina fa samy tsy misy manaiky ho resy. Tsy maintsy miandry ny andro mazava indray vao mety hahita sy hahare ny tohiny ny rehetra. Ahoana marina ny zavamisy? Fa dia nahavariana ahy tokoa ny mandre fa dia tapitra fiandohan'ny takariva ny fifampitifirana. samy tsy manana infra-rouge ve dia nitsahatra sa natsahatra ny fifampitifirana dia niala ny ankolafin-kery (ity vao tena ankolafin-kery mitam-piadiana) sa dia nitohy ny alina tokoa ny fifampitifirana? Sa efa vita tokoa ny ady tamin'iny indray mitoraka iny? Iray tamin'ny tsy sasatra ny nandainga ny mpitondra teny sady toa nitarika ireo te-handrava ny hetsika teny Andrainarivo. Nodradradradraina hatrany fa hitolo-batana ny mpitarika ireo hiaro ny mpanao fihetsiketsehana saingy tsy nisy hatramin'ny farany izany sady niteny tao amin'ny onjam-peo mihitsy izy, dia mody nolazaina hoe matahotra ny ainy. Izay no antony nahatonga ny mpanara-baovao tsy nino loatra hoe resy ny FIGN.
Dia hanakory indray ny andron'ny zoma? tsy hisy na inona na inona intsony sa toeran-kafa indray no ipoiran'ny fikomiana miaramila? Valin'ny alakamisy ny zoma. Raha tsy misy na inona na inona mitranga intsony dia izay no izy araka ny fiteny fa raha misy tohiny ny raharaha dia baraingo tanteraka amin'izay ny raharaham-pirenena.
Jentilisa, 21 mey 2010, Antananarivo 01:26
Fanamarihana: mety hamoahako vaovao farany eto mandritra ny andro tontolo raha misy izany ankoatra ny ao amin'ny twitter.